Iran: Nosoloina Sarim-bavahadin’ny Anjerimanontolo Ny Mariky Ny Nokleary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Marsa 2015 2:34 GMT
Navoakan'ny Banky Foibe Ao Iran ilay vola taratasy vaovao 50.000 Rial nanoloana ho vavahadin'ny Anjerimanontolon'i Teheran ny sary ao ambadika. Io sary io no manolo ilay sarintanin'i Iran nahitana ny mariky ny nokleary.
Ny 2 Martsa lasa teo no navoaky ny Banky Foibe ao Iran ilay vola taratasy vaovao 50.000 Rial, izay noraisin'ny mpanara-baovao maro ho “fihetsika politika”. Ilay vola vaovao, izay naseho ho fantatr'ireo mpikambana ao amin'ny Anjerimanontolon'i Teheran tamin'ny 4 Martsa, dia manolo ireo sary famantarana ny nokleary ho ny vavahadin'ny Anjerimanontolon'i Teheran.
Amin'izao fotoana izao, dia ao anatin'ny fifampiraharahàna miaraka amin'ny P5+1 any Lausanne, Soisa, momba ny fandaharanasa nokleariny ny governemanta Iraniana. Ny faran'ny Martsa no napetraka ho fetra farany amin'ireo fifanarahana. Ny fifanarahana iray momba ny nokleary no hamaritra ny fetran'ny fanatavezana ny nokleary ao Iran ho fanampin'ny fomba hanesorana ireo sazy mihatra amin'i Iran.
Namoaka vola taratasy vaovao 50K rial ny Banky Foibe ao Iran. Nisy mariky ny nokleary ilay iray taloha, ilay iray vaovao kosa misy sarin'ny vavahadin'ny Anjerimanontolon'i Teheran
Eny resaka politika io. Ity ny vola taratasy teo aloha
Nosoloina ny tenin'i Ferdowsi ihany koa ny an'i Muhamad, saingy tsy any no halehako satria fitiavan-tanindrazana Iraniana madio rano koa ilay tenin'i Muhamad
Tao anaty resaka ho an'ny Global Voices, nohazavain'ì Harris fa mitodika mankany amin'ilay vola taloha natonta taorian'ny revolisionan'ny 1979 ilay fiovàna :
vola taratasy 500 Rial fahiny natonta taorian'ny revolisiona islamika voalohany tamin'ny 1979, nahitàna ny sarin'ny vavahadin'ny Anjerimanontolon'i Teheran. Sary tao amin'ny Wikipedia.
Hita teo amin'ireo vola 500 rial navoaka tamin'ny 1981 na taty aoriana kely ireo vavahadin'i Teheran ireo. Araka izany dia fampahatsiahivana izany vola izany io, saingy koa fampahatsiarovana ny maha-zava-dehibe ny akademia ambony sy ny fanabeazana amin'ny fandrafetana ny lamina revolisionera sy izay zavatra rehefa mifamatotra aminy. Fa, mazava ho azy, tetika tsy misy hafa amin'izany koa ny resaka angovo nokleary sy ny zavatra rehetra mifamatotra aminy miaraka amin'ny siansa sy ny fandrosoana.